ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » 12 အောင်မြင်တဲ့တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အဘို့အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
မည်သို့အောင်မြင်တဲ့လူတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းဖြစ်ခံစားရပါဘူး? ကျနော်တို့ပျော်စရာဘုံစရိုက်လက္ခဏာတို့ကို၎င်းသိမ်းယူ, Fearless နှင့်အဆင့်မြှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှု. ကျနော်တို့အနာဂတ် think အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုဖွယ်ရှိပါတယ်: အဘယ်သူသည်မယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းနဲ့ညစာအတူစားရှိသည်သွားပါ၏? ကျနော်ဒီညအချိုရည်အဘို့အဘယ်သူသည်ခေါ်နိုင်ပါတယ်? အဘယ်သူသည်ကျွန်းများမှနောက်ဆုံးမိနစ်ခရီးစဉ်အတွက်ငါ့ကို join မှအခမဲ့ဖွင်? ငါတို့သည်ဤလောက-at-ကြီးများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့လေ့: လူများတို့နှင့်အတူအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်း, ပါတီများနှင့်သောအရပ်တို့ကိုမယ့်အစားပံ့ပိုးမှုတစ်ခုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်မိသားစုအပေါ်အားကိုး. အပျင်းစရာကိုမမေ့လျော့, နေအိမ်သည်တယောက်တည်းတစ်ခုတည်းအဆိုးမြင်မှိုင်း; ကျွန်တော်အပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လူမှုရေးအသိုင်းအဝိုင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲရာတွင်ပါဝင်နေပါတယ်. သင့်အနေဖြင့်အားကစားရုံကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်, ထိုတောက်, စားသောက်ဆိုင်, နှင့်အွန်လိုင်းကိုနှိပ်, နားချင်းဆက်မှီ၏ရောင့်ရဲသောကြောင့်ကုန်သွယ်အလိုအလျောက်နှင့်လွတ်လပ်မှု. ဒီမှာအားလုံးဆိုရင် single သူတို့ရဲ့ဆက်လက်အောင်မြင်မှုသေချာစေရန်အားအပိုင်သင့်ကြောင်းတစ်ဒါဇင်ရပါမည်-ရှိသည်များမှာ.
1. အဆိုပါမတ်မတ်. သင်သိလား, သင်၏မျက်စိထဲမှာအရောင်ကိုထုတ်တော်မူ၏သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ပေါင်းစပ်, သင့်ရဲ့ခါးဆစ်တိုးမြှင့်, နှင့်သင်လွန်းခုခံတွန်းလှန်လွန်းကောင်းခံစားမိစေသည်တည်းသင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုချွတ်ပြသ!
2. တွင်ကြွေးကြော်ရမည်မှာရန်ပခုံး. လူတိုင်းအထီးကျန်ရရှိသွားတဲ့. သွားသောအသက်ကြီးဟာသကိုသတိရပါ, “အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သူမ၏ဖြည့်ဆည်းရန်လူသုံးယောက်တို့သည်လိုအပ်သည်: သူမ၏ဂရုစိုက်ရန်တစ်ခုမှာ. တစ်ဦးကသူ့အပေါ်ကောင်းဖြစ်. ထိုအခါအခြားတစ်ဦးမှအခြားနှစ်ဦးနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်။”
3. ကာရာအိုကေသီချင်း. သင်နာသီချင်းမဆိုနိုင်ပါက, ပြီးပြည့်စုံသောအစေးမလိုအပ်ပါဘူးတဲ့တေးသွားကိုရွေးရန်သေချာစေပါ.
6. ချွေတာသုံးစွဲ သင် backup လုပ်ထားရှိသည်ရမှာဖြစ်ပါတယ် n.
7. ရနံ့ဖယောင်းတိုင် သင်နှင့်သင့်အိမ်ကို refresh လုပ်ပြီးအနားယူကြီးကိုလမ်း n, နှင့်ဟေး, လူတိုင်းဖယောင်းတိုင်ထွန်းကပိုမိုကောင်းမွန်ကြည့်.
8. ကောင်းဗီဒီယို / DVD ကိုခံစားရ N တစ်ဦးမိုးရာသီနေ့၌အတွက် pop တစ်ခုခု, ထိုကြောင်သည်သေသောနေ့ရက်ကာလကို, နေ့အသင်သည်သင်၏အလုပ်ပြုတ်ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတဦးနဲ့တိုကျပှဲရှိသည်.
9. အခွက်တဆယ်. သင့်အနေဖြင့်ပါတီတစ်ခုခုထည့်သွင်းထားရမည် & အဘယ်ကြောင့်အခြားသူမိတ်ဆွေများနှင့်တကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏သင်တို့အပေါ်မှာရှိသည်မယ်လို့? ကောင်းသောစပျစ်ရည်ကိုယူခဲ့, juggle ဘယ်လိုသိ, သတ္တိစကားလက်ဆုံ add.
10. ပုဂ္ဂိုလ် & Self-ရှင်းလင်း, ဒါပေမယ့်စိုက်ပျိုးနိုင်.
11. ကြီးစွာသောအပြုံး ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်နှင့် instant ဆွဲဆောင်မှုပေးသည်!
12. အဆိုပါကော့တေး. ဒါဟာစကားလက်ဆုံÖ sparks နှင့်သင် သာ. မသောက်မီနူးနှင့်အတူ fumbling နေစဉ်မဟုတ်ဘဲ clueless ထက်အေးမြသောက်စရာအမိန့်ကိုယုံကြည်စိတ်ချကြည့်ရှုမည်မဟုတ်?
ဂရိတ်ပါတီလှည့်ကွက်. စွန်ပလွံစာဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်လက်ရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလူတန်းစားကိုယူ. အသစ်ရဲ့တွေ့ရှိခွက်တဆယ်နှင့်သင်၏အဆွေခင်ပွန်းတို့မွေ့လျော်ခြင်း.
ဒီသောက်ခိုးယူ: အံ့ချီးဖွယ် Mojito
ငါ၏မိတ်ဆွေ McKinley အ quintessential bi-Coastal ဖျော်ယမကာစပ်ဖြစ်ပါသည်. သူကသူ့ကိုမန်ဟက်တန်နှင့်ဆန်ဖရန်စ္စကို၏တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အမြို့ပြမက္ကာမှာအကောင်းဆုံးပါတီများရန်ဖိတ်ခေါ်လာတယ်တဲ့ကော့တေးစပ်စုံလင်ခြင်းရဲ့. အဘယ်ကြောင့်သင်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူနေအိမ်မင်္ဂလာရှိသောအချိန်ဖျော်ယမကာစပ်မကစားကြဘူး, ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့လက်မှတ်ကိုသောက်အတိုင်းဤစာရွက်ချမှတ်? အချို့သောအလေးအနက် mojo ကိုနှိုးဆော်, ကလေး!
McKinley ရဲ့သွေးလိမ္မော်ရောင် Mojito
၏ဖျော်ရည် 1/2 သံပုရာသီး
အရပ်ရှည်ရှည်ကိုအသုံးပြုပါ, ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ဖန်ခွက်. ထိုအသွေးကိုလိမ္မော်ရောင်အခန်းကဏ္ဍများကိုယူ,5Mint အရွက်, သကြားနဲ့ထုံးဖျော်ရည်; ဖန်ခွက်ကိုအတွက် muddle. ဖန်ခွက်ကိုဖြည့်ရန်ရေခဲ Add. အရမ်၌; ကောင်းစွာနှိုးဆော်. ပို Mint အရွက်နှင့်အတူကလပ်ဆော်ဒါနှင့်အပါအ၏ကျန်းမာသန်မျိုးစုံဖြင့်ပယ် Top.